सर्दू खोला गाउं पस्दा स्थानीयको बेहाल
हिमाल राई/ चतरा
धरान - वराहक्षेत्रको सीमामा रहेको सर्दू खोला गाउ पसेपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् । गाउ जलमय भएको छ भने घरभित्रै खोला पस्दा आहाल बनेको छ ।
वराहक्षेत्र नगरपालिकाका वडा नं. ३ स्थित नडाहा, इक्राइलगायतका गाउमा सर्दू खोला पसेपछि गाउले घरभित्रको पानी फ्याक्दै गरेका देखिन्छन् । गएको केही दिनदेखिको निरन्तर वर्षापछि स्थानीय खहरे खोलामा पानीको सतह बढेको छ ।
सर्दू खोला नियन्त्रणमा सरोकारवाला संवेदनशील नहुदा वराहक्षेत्र ३ नडाहाका स्थानीयका घरघरमा खहरे पसेको वंशीधर खड्काले आरोप लगाए । उनी भन्छन्, दशकौं अघिदेखि हामीले सर्दू खोलाको वितण्डाका बारेमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल सबैसग हारगुहार गरेका छौं, तर उनीहरुले ध्यान नदिंदा वर्षेनी गाउमा खोला पस्ने गरेको छ ।
नडाहा चोकमा बाढी पसेपछि स्थानीयवासी त्रसित भएको र रातभर जागै बस्नु परेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
वराहक्षेत्र ३ नडाहाका इन्द्र लिम्बूले बाढीले विजोग बनाएको भन्दै दुखेसो गरे । बाढीले धानखेतीमा समेत हिलो र बालुवा थुपारिदिएको स्थानीयको भनाइ छ । वराहक्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत वडाध्यक्ष रुद्रबहादुर दाहालसहितको टोलीले सर्दूको वितण्डाको अनुगमन गरेका छन् ।
वडाध्यक्ष दाहालका अनुसार सर्दूको पानी पसेर स्थानीयको धनमालको क्षति भएको छ । सर्दू खोलाले भरौललाई जोखिमको अवस्थामा पुर्याएको वडाध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
पटनाली खोला कटानले पुल जोखिममा
धरान वराहक्षेत्र जोड्ने पटनाली खोलामा लगाइएको दुवै वटा पुल जोखिमको अवस्थामा पुगेको छ । खोलाले दायाबाया किनारा कटान गर्दा पक्की पुल नै जोखिमको अवस्थामा पुगेको वडाध्यक्ष रुद्र दाहालले जानकारी दिए ।
हैटे खोलामा अस्थायी तटबन्ध
वराहक्षेत्र ५ स्थित हैटे खोलामा आएको बाढीले बाध भत्काएको छ । बाध भत्काएपछि स्थानीय क्षेत्र बाढीको चपेटामा परेको छ । बाढीले क्षति गर्ने भएपछि नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले हैटे खोलामा अस्थायी तटबन्धको काम सुरु गरेको छ ।
गहने खोलाले ह्युमपाइप बगायो
वराहक्षेत्र २ स्थित गहने खोलामा आएको बाढीले ह्युमपाइप बगाएको छ । वराहक्षेत्र २ स्थित जब्दी र वडा नं. ७ जोड्ने खोलाको ह्युम पाइप बगाउदा आवतजावतमा समस्या आएको छ ।
यता गहने खोलाले हालै निर्माण भएको पुलमा समेत कटान गरेको छ । बाढीले कटान गरेपछि पुल जोखिममा परेको छ । उक्त पुल निर्माण तत्काल गर्न स्थानीयले माग गरेका छन् ।
बराहक्षेत्रको साकेला पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिमा दिनेश राईको नेतृत्व
म्यानमार र युएईबाट आएका ४२ जना चतरास्थित होल्डिङ एरियामा आइपुगे
सप्तकोसीमा पानीको बहाब बढदै, तटिय क्षेत्रमा सजगता अपनाउन आग्रह
तरकारी कुहिन थालेपछि वराहक्षेत्रस्थित ढोलबजियाका कृषक निराश